Iyo nyowani vhezheni yeMyPaint 2.0 inosvika nerutsigiro rwePython 3, kugadzirisa kubrashi uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memakore mana ekuvandudza, Iyo nyowani vhezheni yeakasarudzika chirongwa che digital pendi MyPaint 2.0.0 yakaburitswa. Iyi vhezheni itsva inosimbiswa sebazi idzva rakatsiga kubvira pakaitwa kusvetuka kukuru, kubva mushanduro 1.3 kuenda kune itsva 2.0.
Kune avo vasingazive MyPaint, vanofanira kuziva kuti izvi yakavhurika sosi muchinjiko-chikuva application uye yemahara yakanyorwa muC, C ++ uye Python uye kuti kodhi yayo inoburitswa neGPL v2 yaishandiswa kuenzanisira uye kudhirowa netafura ye digitizing kushandisa zvakanakisa chishandiso ichi, kunyange hazvo zvichikwanisika kupenda uye kudhirowa negonzo
Iyo ine yakapusa interface, uko panenge zvese zvekutanga zvekudhirowa mabasa zvinopihwa nzira pfupi, zvichiita kuti uwane maturusi nekukurumidza. Zvakare ndinoziva unogona kuviga iyo graphical interface, uye tarisa kutarisisa kwese, pasina kutsauswa nemabhatani asina basa kana akaomarara kana mapaduru.
1 Main nhau dzeMyPaint 2.0
2 Maitiro ekuisa Mypaint paLinux?
2.1 Kuisirwa kubva kuFlatHub
2.2 Kuisirwa kubva kuAppImage
Main nhau dzeMyPaint 2.0
Mune ino vhezheni nyowani yeMyPaint 2.0 nekusarudzika, kuumbwa kwemitsetse uye kusanganisa kwe spectral zvinoshandiswa (pigment mode), ayo akakodzera kwazvo kugadzira basa rinoenzanisa kushandiswa kwechinyakare zvishandiso uye maturusi.
Sezvo nzira nyowani dzisiri dzisina zvipingaidzo, senge kudzikisira kwekuita, kuomarara kwehukama hwekubatanidza, uye kutyora kwekutakura; MyPaint 1.x inowirirana modhi inopihwa muzvirongwa uye yakavhurika dialog dialog.
Kana iyi nzira yasarudzwa, lkusanganisa kwekutarisa kwakaremara uye nekukanganisa, zvidimbu zvakajairika zvinoshandiswa pachinzvimbo chezvikamu zvine mavara, zvichikubvumidza iwe kuvhura mafaera akagadzirwa mushanduro dzakapfuura dzino tarisa dzakasiyana muMyPaint 2.
kunze kwaizvozvo ikozvino kutenderera uye kuyera kanivhasi kunokanganisa chimiro chebrashi kurova. Hutsva hunhu hwekuita hunofananidzwa nekuita kana bepa rashandurwa pamberi peartist (kare, iyo shading yaiitwa senge muenzi wacho aitenderera pamwe chete nejira). Zvimwechetezvo, shanduko muzinga rekuswededza inokanganisa iyo shading parameter, sekunge chidimbu chepepa chakakudzwa pamberi pemhizha.
Zvakare se taura akawanda matsva mabrashi parameter (offset, advanced blur, posterization, pigment marongero) uye bhurasho yekuisa maficha (kona yekurwisa, base radius, zoom level, nezvimwewo). Mimwe modhi yekuenzanisira yakaenzanirana inotsanangurwa: yakamira, yakamira + yakatwasuka, yakatenderera, chando chechando.
Chishandiso chekuzadza chakagadziridzwa, Wakawedzera mupumburu zadza, shading, gap kuona. Uye zvakare zvinoonekwa kuti rutsigiro ruzere rwunopihwa Python3 uye iyo shanduko yekushandisa iyo PyGI raibhurari (PyGObject) panzvimbo pePyGTK yapera.
AppImage inovaka yakawedzerwa.
Nyowani Yekunze Matare.
Mutauro wekupindirana unogadziriswa musarudzo dzemushandisi.
Mari yakaunganidzwa yakagadzirirwa saizi.
Yakagadziriswa akawanda mabugs, blockers, uye zvimwe zvinotsamwisa.
Kugona kuteedzera zvinongedzo nemakiyi ekuchinja.
Tsigiro yemubhadharo wekutenderera.
Kuita kwekuzadza kwemafashama kwakagadziriswa.
Wakawedzera muripo, kupera, uye gapuro kuona kune Mafashama.
Maitiro ekuisa Mypaint paLinux?
Kana iwe uchida kuisa ichi chishandiso pane yako system, unogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Kune avo vari vashandisi veUbuntu, Debian kana chero chinobva pane izvi kubva kumagumo (iyo iwe yaunogona kuvhura nekiyi musanganiswa Ctrl + Alt + T) uye mairi tinonyora
Waita izvi izvozvi isu tichagadzirisa yedu runyorwa rwe mapakeji ne:
Pakupedzisira tichaenda kunyorera unotevera rairo yekuisa iko kunyorera
Kuisirwa kubva kuFlatHub
Kana iwe usiri kuda kuwedzera chero repository kune yako system uye iwe unoda Flatpak mapakeji, iwe unofanirwa kuziva kuti MyPaint ine yakadaro package.
Kuisa chete Iwe unofanirwa kuve nerutsigiro rwekuisa iyi mhando yekushandisa pakombuta yako uye nekuita unotevera kuraira:
Uye kana iwe ukasakwanisa kuwana iyo yekutanga application mune yako menyu menyu, unogona kumhanya MyPaint kubva kune terminal ne:
Pakupedzisira, imwe nzira yekumisikidza iri nerubatsiro rweAppImage, izvo zvatinogona kurodha pasi nekutaipa unotevera kuraira:
Tinopa zvibvumirano ne:
sudo chmod +x MyPaint-v2.0.0.AppImage
Uye ivo vanomhanya kunyorera ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeMyPaint 2.0 inosvika nerutsigiro rwePython 3, kugadzirisa kubrashi uye nezvimwe
Yakakura kana iri yemapiritsi emifananidzo!